ေမြးေန႔မွာ အေဖ့ကုိ သိန္း ၁၀၀၀ ပံုၿပီးကန္ေတာ့တဲ့ အထူးကုဆရာဝန္ေလး - The Lifestyle Myanmar
Home News ေမြးေန႔မွာ အေဖ့ကုိ သိန္း ၁၀၀၀ ပံုၿပီးကန္ေတာ့တဲ့ အထူးကုဆရာဝန္ေလး
ေမြးေန႔မွာ အေဖ့ကုိ သိန္း ၁၀၀၀ ပံုၿပီးကန္ေတာ့တဲ့ အထူးကုဆရာဝန္ေလး
“တကယ္ေတာ့….. ေမြးေန႔အမွတ္တရဆိုၿပီး ကားလဲ ဖို႔ အတြက္….ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္အားခထဲက ဖယ္ၿပီးစုထားတဲ့ ေငြသိန္း ၁၀၀၀ ပါ……
ေမြးေန႔နားလည္း နီးလာေရာ …. စိတ္ထဲမွာ အေဖ့ကိုပဲ ကန္ေတာ့ခ်င္စိတ္အလိုလိုျဖစ္လာလို႔…. ကားမလဲ ျဖစ္ေတာ့ ပဲ….အေဖ လိုရာသံုးဖို႔ အေဖ့အတြက္ ဒီေငြ သိန္းတစ္ေထာင္ နဲ႔ ကန္ေတာ့အပ္ပါတယ္…..ေမြးေန႔မွာ ဇိမ္ခံကားတစ္စီးရလို႔ ေပ်ာ္ရႊင္ရတာထက္…မိဘရဲ႕စိတ္ခ်မ္းသာမူ႔ေၾကာင့္ တန္ျပန္ရရွိတဲ့ ပီတိက ဘာနဲ႔မွလဲလို႔ရမတဲ့ ေမြးေန႔အမွတ္တရ ေပ်ာ္ရႊင္မူ႔ပါ….”
Aung Thiha (ေလးစားမႈျဖင့္ ခရက္ဒစ္)
မွေးနေ့မှာ အဖေ့ကို သိန်း ၁၀၀၀ ပုံပြီးကန်တော့တဲ့ မန္တလေးက အလှအပဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်လေး အောင်သီဟရဲ့ ပို့စ်ကို ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အထူးကုဆရာဝန်လေးဟာ ရုပ်ရည်ချောမောလှပပြီး ဖိုတိုမော်ဒယ်အလုပ်ကိုလည်း ဝါသနာ အရလုပ်ကိုင်လေ့ ရှိပါတယ်။
မွေးနေ့မှာ လိုချင်နေတဲ့ ကားကိုမလဲဘဲ အဖေ့ကို သိန်း ၁၀၀၀ ပုံ ကန်တော့တာ ကြားရသူတိုင်း ဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်။ မိဘကျေးဇူး သိတတ်တဲ့ သားလိမ္မာလေး တဦး ဖြစ်တာကြောင့် ဘဝ ခရီးလမ်း တလျှောက် ယခုထက် ပိုပြီးတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ မူရင်းပို့စ်ကို အောက်မှာ ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
“တကယ်တော့….. မွေးနေ့အမှတ်တရဆိုပြီး ကားလဲ ဖို့ အတွက်….ကိုယ့်ရဲ့လုပ်အားခထဲက ဖယ်ပြီးစုထားတဲ့ ငွေသိန်း ၁၀၀၀ ပါ……
မွေးနေ့နားလည်း နီးလာရော …. စိတ်ထဲမှာ အဖေ့ကိုပဲ ကန်တော့ချင်စိတ်အလိုလိုဖြစ်လာလို့…. ကားမလဲ ဖြစ်တော့ ပဲ….အဖေ လိုရာသုံးဖို့ အဖေ့အတွက် ဒီငွေ သိန်းတစ်ထောင် နဲ့ ကန်တော့အပ်ပါတယ်…..မွေးနေ့မှာ ဇိမ်ခံကားတစ်စီးရလို့ ပျော်ရွှင်ရတာထက်…မိဘရဲ့စိတ်ချမ်းသာမူ့ကြောင့် တန်ပြန်ရရှိတဲ့ ပီတိက ဘာနဲ့မှလဲလို့ရမတဲ့ မွေးနေ့အမှတ်တရ ပျော်ရွှင်မူ့ပါ….”
Aung Thiha (လေးစားမှုဖြင့် ခရက်ဒစ်)
အထူးကု ဆရာဝန္ေလး ေအာင္သီဟ
Previous article၂၀၂၂ ကမၻာ့ဖလားေျခစစ္ပြဲ ျမန္မာအသင္း ဂ်ပန္ႏွင့္တအုပ္စုထဲက်
Next articleMaster Chef ရဲ႕ ဒုိင္လူႀကီး ဦးရဲထြဋ္ဝင္း အေၾကာင္း